Accueil > Gazetin'ny nosy > Tanànan’Antananarivo : Tsy mahavita ny asany mihitsy ry Ravalomanana
Tanànan’Antananarivo : Tsy mahavita ny asany mihitsy ry Ravalomanana
Voatery entina ety ambony gazety ny zava-misy iainan’ny vahoaka andavanandro. Amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao dia amin’ny 5 ora sy sasany hariva dia efa manomboka maizina eto amintsika ary amin’ny 6 ora maraina, tsy mbola tena mazava.
Maro amin’ny mponina anefa no mbola na efa eny andalambe amin’ireo ora ireo na ny aorian’ny amin’ny 5 ora sy sasany hariva na ny alohan’ny amin’ny 6 ora maraina.
Faritra maro eto andrenivohitra no tsy ahitana takamoa (ampoules) amin’ny andrin-jiron’ny Jirama eny andalambe eny. Tena maizina sy mampidi-doza, na ny mandeha fiara na ny mandeha “môtô” na ny mandeha bisikileta na ny mitarika sarety sy posiposy, ary na ny mandeha an-tongotra koa . Maro ny lozam-pifamoivoizana mitranga noho izany haizin’ny lalana izany. Ny any anelakelan-tranon’Antananarivo izany moa dia tsy tenenina intsony nefa ny ankamaroan’ny mponina eto dia voatery miditra elakelan-trano ny mody any aminy.
Voalaza matetika fa anjaran’ny fiadidiana ny tanàna ny miandraikitra ny fiantohana ireny takamoa ireny.
Ny vahoaka, tompoko, dia mitaky ny hanajana ny zony ka mba apetaho ny takamoa. Inoanay fa raha vanim-potoanan’ny fifidianana filohampirenena ny ririnina toa izao dia ho nihazakazaka ny mpifaninana nametaka takamoa ny arabe teto Antananarivo sy ny tanàna rehetra efa tongan’ny herin’aratra ho fisarihana ny vaton’ny mpifidy. Indrisy fa tamin’ny fampielezan-kevitra ny fifidianana solombava teo dia vitsy ireo mpifaninana hofidiana no mba nametaka takamoa tamin’ny lalana, ary ny maro aza dia ny elakelatrano no tena nametrahan’izy ireny takamoa fa tsy ny arabe.
Efa zava-dehibe izany saingy tsy mamaly mihitsy ny maha-fanjakana tsara tantana izany. Ny fifidianana mantsy dia isaka ny dimy taona ka hiandry isaka ny dimy taona ve vao hisy mpitsinjo ireny fanazavana ny arabe sy ny lalan-kely anelakelan-trano ireny. Etsy andanin’izany, tsy fanajana ny fanjakana tan-dalàna koa ny fialokalofan’ny tompon’andraikitra ara-panjakana na ny avy amin’ny kaominina ny adidiny, ka hianteherany amin’ny mpanao asa soa, ohatra, na ny mpifaninana manao fampielezan-kevitra ara-pifidianana, na ny firaisa-monim-pirenena.
Aza adinoina fa antony iray koa mahabetsaka ny mpanao ratsy any anaty tanàna any ny tsy fisian’ny jiro manazava ka zary mampahazo vahana ny mpamaky trano, ny mpanendaka, ny mpandroba isan-karazany.
Tsy tokony hiandry ny eo anivon’ny kaominina ny fikarakarana ny vahoaka fa mandraisa fepetra ianareo Jirama na ny ministeran’ny Angovo fa mijaly ny ambanilanitra e!
Hain’ny vahoaka ihany ny fepetra horaisina amin’ny tompon’andraikitra ny tanàna rehefa tonga ny fifidianana fa tokony handray andraikitra aloha ianareo eo anivon’ny fitondrana foibe.
Marihinay fa tsy eto Antananarivo Renivohitra ihany no tokony hojerena ny momba izany fa ny lafivalon’ny Nosy mihitsy.
Mba misia ange amintsika tompon’andraikitra mba midina mandeha mamakivaky ny tanànan’Antananarivo amin’ny alina e! Dia araho maso ny haizina manjaka. Ny jiro na fanazavana avy amin’ireny tranon’olon-tsotra na tranom-barotra misy dokam-barotra mirehitra jiro ireny no mba manazava ny arabe fa izay andrin-jiron’ny Jirama dia ny 80% no tsy misy takamoa.
Ny fikambanana mitonona ho mpiaro ny zon’ny mpanjifa koa dia takiana mba tsy hikombom-bava na hitomoe-poana eo anoloan’izany fa mijaly ny vahoaka e!
Pastora Ramino Paul : Nodimandry teo amin’ny faha-77 taonany
Politikam-pampandrosoana : Ny tombotsoan’ny daholobe aloha vao ny an’olombitsy
Inty sy Nday : Tsy ampy olona mpanao politika
Faritra Boeny : Trano mora miisa roa arivo no vinavinaina hahorina
Tetezan’i Behoririka : Hanjakan’ny mpanendaka vao alina ny androany
Sefafi : Moramora ihany e !
Radio Tsioka Vao : Namokatra olomangam-pirenena maro
Olan’ny famatsian-drano : Vahaolana vonjimaika aloha no haroson’ny Jirama
Tetikasa Tanamasoandro : « Vonona hifampiresaka hatrany ny fanjakana »
Volam-panjakana “CDBF” : Voahodinkodina ny 1 157 miliara ariary